Cavalier King Charles Spaniel: Izvo zvaunofanira kuziva - Inobereka
Cavalier King Charles Spaniel: Izvo zvaunofanira kuziva
Kana iwe uchitsvaga imbwa diki ine huwandu hwakawanda hwehunhu, iyo Cavalier King Charles Spaniel ndomumwe wedu watinofarira. Iwo iwo akakwana musanganiswa werudzi rwekutambisa uye runako rweRegal.
Mazita emazita kwavari anosanganisira Cav, Cavie, Cavalier, kana Iyo Comforter Spaniel. Yakatumidzwa mushure mehumambo, rudzi urwu rwakapfava uye runoratidzira huzhinji hwemitambo uye simba.
Pane chikonzero King Charles I naMambo Charles II vakavachengeta.
Iye Cavalier King Charles Spaniel akabva kupi?
Chii chinonzi Cavalier King Charles Spaniel Imbwa inotaridzika?
Temperament: Ko Cavalier King Charles Spaniels anohukura zvakanyanya?
Maitiro ekuchengeta yako Cavalier King Charles Spaniel
Cavalier King Charles Spaniel imbwa dzinobereka matambudziko ehutano
Yakawanda zvakadii iyo Cavalier King Charles Spaniel Puppy?
Cavalier King Charles Spaniel achienzaniswa nemamwe marudzi
Cavalier King Charles Spaniel Musanganiswa
Ndiani anofanira kuwana Cavalier King Charles Spaniel?
Iyo Cavalier King Charles Spaniel ine inonakidza nhoroondo. Ivo vakabva kubva England mu 1600s uye, sekurudziro yezita, uine Spaniel midzi.
Aya maComforter Spaniels akagadzira mabhodhoro emvura anopisa uye anopisa. Asi vaichengeta zvakare nhata kure nevaridzi vadzo.
The King Charles Cavalier Spaniel ndiye akasarudzwa mhando yemadzimambo eEuropean senge Mambo Charles ini naMambo Charles II .
King Charles II akatoshoropodzwa nekuisa imbwa dzake pamusoro pezvinhu zvehurumende. Iyo Cavalier imbwa yakamushandisa iye zvekuti vakazozivikanwa se Mambo Charles Spaniels .
Akange asiri wekupedzisira mambo kuchengeta uyu mwana, zvakadaro.
Gare gare iyo Mutongi we Marlborough Akave mutsigiri weCav, kunyanya iyo Blenheim. Iye akatovatumidza nemazita epfuma yake, Blenheim Palace .
Uye muzana ramakore rechi19, iyi imbwa yakava shamwari inovimbwa nevapfumi.
Vaberekesi vakatanga kubereka kumeso kwakatarisana Chirungu Toy Spaniel muzana ramakore rechi19, uye ivo vakasimuka mukuzivikanwa. Nekuda kweizvozvo, Mambo Charles Cavalier Spaniel akapotsa aburitswa kunze kwekuvapo.
Muma1920s, muAmerican anonzi Roswell Eldridge yakapa mubairo wemari kuvaberekesi vembwa veBritain panguva yeCrufts Imbwa Show.
Kupa mubairo kumuberekesi uyo aigona kuburitsa King Charles Cavalier Spaniels anonamatwa naMambo Charles I na II.
Vafudzi vakafemerwa kuti vabereke imbwa dzechinyakare dzatinoziva iye zvino saCavalier King Charles Spaniels. Izvi zvakakonzera kuwedzera mukuzivikanwa, imbwa idzi dzichive imwe yemhando dzakakurumbira muEngland.
Maitiro akafanana akatora nguva yakareba kuti abate muUnited States, asi muna 1996, Iyo American Kennel Club yakaziva rudzi urwu.
Vazhinji vanofungidzira imbwa idzi dzekutambisa dzakakonzerwa nekurera kwe madiki Spaniels uye Imbwa dzekumabvazuva dzekumabvazuva kufanana neTibetan Spaniel kana chiJapan Chin.
Yakafambiswa senge imbwa inofambidzana, iyi lapdog yekutambisa yakazove inodiwa yemhuri.
Iyo American kirabhu kirabhu ( AKC ) inobvuma iyo King Charles Cavalier Spaniel imbwa dzinza sechikamu che Toy Boka padivi peJapan Chin, Pug, uye yeChirungu Toy Spaniel.
Kana iwe uri kuronga kutora Cavalier King Charles Spaniel imbwa muUS, iwe uchazoda kujoina iyo American Cavalier Mambo Charles Spaniel Kirabhu .
Iyo Cavalier yakatoita nyeredzi sembwa yaCharlotte York muHBO Bonde neGuta.
Iyi fido ine imwechete yekuvaka seiyo inoshanda Spaniel, ingori mune diki, yakanyatsogadzikana muviri. Ivo vane yemahara uye yakashongedzwa gait iyo ine yakanaka dhiraivha uye inosvika.
Chiso chavo chinoratidzira chinyoro uye chinotapira kutaura kuchanyungudutsa moyo wako. Ivo vaviri vari kushingaira uye nenyasha. Kunaka uye kutaridzika kwehumambo kune kwakanyanya kukosha mune iyi imbwa mhando.
Iwe haufanire kucheka, kuveza kana kugadziridza hunyoro hwavo kana iwe uchida kutevedzera mwero wekubereka.
Yakazara, yakapfava tambo yakasungwa uye mutsipa murefu unogara pamusoro pemapfudzi avo akatsvedza, uye vane chipfuva chakadzika zvine mwero.
Iyo ine yakasarudzika yakakura, yakatenderera maziso ayo anowanzo kuve anodziya, akasviba brown ruvara. Iko kusundira pasi peziso kunogadzira kunyungudika uye kutaridzika kutaridzika. Vavhivha vanogona kubatwa nemaziso emvura asi kazhinji vanodarika izvi.
Iyi imbwa inobereka ine hura refu, ichikwenya minhenga nzeve dzakasimudzwa kumusoro. Iwo akatambanuka pakorona uye, kana imbwa yakangwarira, ivo vanofarira kuumbiridza kumeso kwavo.
Mhando yekubereka inoda nzeve refu, asi hurefu hunosiyana zvichienderana neropa.
King Charles Cavalier Spaniels vane plumy muswe. Mboro inokwezva zvakanyanya kana ichinge iri mukufamba kwenguva kana rudzi rwacho rwuri kufamba.
Kukura kwaMambo Charles Cavalier Spaniel
Idzi imbwa diki chikamu che toy boka . Kana vakura zvakakwana, vanosvika pakatenderedza 12-13 inches (30-33 cm) pakukwirira uye huremu ungangoita 13-18 mapaundi (5.8-8 kg).
Vachasvika pakukura kwavo kuzere pakati pemwedzi gumi nesere kusvika makumi maviri nemana ekuberekwa. Kana vaine gore rimwe chete, Cavalier King Charles anofanirwa kuyera pakati pegumi nemana kusvika gumi nemasere makirogiramu (5-8 kg).
Asi kune dzimwe shanduro diki. Teacup Cavalier King Charles Spaniels iyo inomira 9-12 inches (22-30 cm) yakareba haina kuzivikanwa neAKC uye inogona kuwanikwa nenzira dzakasiyana dzekuberekesa.
Idzo imbwa diki, dzakanyarara dzinovaita vakanakira dzimba kana makondomu. Masimba avo emagetsi angangoda yadhi diki uye kufamba kwemazuva ese.
King Charles Cavalier Spaniel Chipfeko
Mambo Charles Cavalier Spaniel ane yepakati-refu jasi zvinogona kudaro wavy . Husha hwavo ndihwo silky, uye vane minhenga pachipfuva chavo, makumbo, nzeve, muswe uye tsoka.
Huru yavo inouya mumhando ina dzakasiyana dzakasiyana:
Blenheim , akatumidzwa zita reBlenheim Palace, ari rakapfuma chestnut ruvara pane pearly chena fur . Mamwe eaya maCav ane lozenge (chigunwe chakaita kunge chestnut dot pamusoro pehuma yavo).
Ruby Vatasvi vemabhiza vane jira rakasimba, rakapfuma rakatsvukuruka-shava risina mucherechedzo chena kana makwapa pahuto hwavo.
Dema neTani King Charles Cavaliers vane yakasviba kumashure ine mashoma tan mavara anoratidzira akakomberedza muviri wavo. Unogona kuzviona pamusoro pemeso, mukati mezeve, pachipfuva, nepasi pemuswe nemakumbo.
Tricolor Vavhivha vane jasi jena rine ese matema uye tan mamaki pane chena kumashure. Unogona kuzviwana pameso, pamatama, uye pasi pemuswe.
Iyo yakajairika King Cavalier jasi jasi ndiBlenheim. Mukufananidza, iro risinganetseke ruvara rweCavalier King Charles Spaniels ndiyo nhema neTani jasi.
Sezvo chero shamwari imbwa , iyi spaniel inogadzirawo makuru mhuka dzinovaraidza. Idzo dzakapfava, dzine rudo, uye dzinotapira imbwa dzinoshuvira kufadza. Ivo zvakare vanoita inoshamisa yekurapa imbwa.
Uyezve, iyi imbwa diki inoda kurara pamubhedha zvakanyanya sekuenda kunofamba.
Cavalier King Charles Spaniels hadzisi imbwa dzine ruzha uye hadzihukuri zvakanyanya. Ivo vanogona kuita ruzha kana mumwe munhu akauya kusuo rako, asi ivo vane hushamwari zvakanyanya kuti vape chero tyisidziro chaiyo.
Ivo vakanyanya kunaka-hunhu kuti vazove vanobudirira varindi.
Vavhivha vanoita mimvuri yakanaka kwazvo; hauzombovi wega. Havadi kusurukirwa uye kuwana kunetseka kukuru kwekuparadzanisa . Ivo vanosarudza kuva neanogara munhu shamwari uye vane hunhu hunovimba.
Kana wakasurukirwa kana kuregeredzwa, iyo Cavalier King Charles Spaniel anogona kuva zvinoparadza uye kuhukura zvakawanda . Izvo zvakare hazviite zvakanaka kana ukavadzingira kuseri.
Tsvaga chaizvo zvazvakaita kuva naMambo Charles Cavalier neiyi vhidhiyo pazasi:
Vavhivha vanoita zvakanakisa vari vaviri vaviri . Kana iwe uchikwanisa kuwana maviri, iwe unofanirwa. Ivo vanokudziridza chisungo chakasimba pamwe nevavanoshamwaridzana navo uye pamwe nevanhu vavo. Asi imwe Cav haizotsiure kutariswa kwevanhu kwavanoshuvira.
Ivo vanofarira kukumbundira pamwe nekupa uye kugamuchira rudo. Ivo vanoita vatambi vekutamba vevana vanoda kuvadzidzisa hunyengeri, kumhanya-mhanya, kana kukanda bhora. Uye vanoita zvakanaka imbwa dzemakumbo .
Asi nekuti imbwa diki dzakadai, gara uchitarisa nguva yekutamba nevana vako! Ivo vanogona netsaona kukuvara panguva yekutamba.
Cavaliers vari kwete hasha . Ivo vane hushamwari kune vausingazive uye vanowirirana zvakanaka nedzimwe imbwa. Ivo vanogona kunyange kudzidza kutamba nekitsi.
Asi ita chokwadi kuti kati yako haityi kuzvimiririra kubva parudo rwaCavalier mutambo usingagumi wekudzingirira.
Kana uine mhuka diki dzakadai seshiri, zviri nani kuti utarise chero kusangana pakati padzo. Kunyange vamwe maCavaliers vangave vanyoro, vamwe vanogona kuyedza kuvaruma.
Ivo zvakare vane simba rekuvhima rakasimba kubva kumadzitateguru avo eSpaniel. Ivo vangangodaro vachidzingirira mhuka diki kana dzikasachengetwa pane leash kana mubindu rakakomberedzwa.
Kana iwe uine vana, zvirinani kuti utore Mukadzi weMadzimai Charles Cavalier. Ivo vakadzikama kupfuura vamwe vavo varume. Nekudaro, kana iwe uchitsvaga ine simba mbwanana, iwe unofanirwa kuisa mari kune murume Cavalier.
Vari nyore kudzidzisa uye ndine huchenjeri hwepamusoro . Cavalier King Charles Spaniels anovhenekera vatongi mu imbwa show , uye ivo vanogonesa mumitambo yakawanda ye canine sekuteerera, kugwinya, uye rally.
Chero bedzi iwe ukavafumura kune yekutanga kushamwaridzana uye yakakwana puppy kudzidziswa, yako Cavalier ichave iri shamwari yakakwana, kunyangwe yakatenderedza dzimwe imbwa, vanhu, uye mamiriro matsva.
Ivo vakagadzirira kuita chero chinhu kufadza varidzi vavo. With kusimbisa kwakanaka uye kurapwa zvino neapo, kudzidzisa imbwa yako yekutamba kunenge kuri nyore.
Iwe haufanire kupopota kwavari, zvakadaro. Idzo imbwa dzinonzwisisa dzine hunhu hwakapfava. Izvo zvinongovaita kuti vavanze kana kunyunyuta. Panzvimbo pekupa mubairo wakanaka!
Kudzidziswa kwe potty wako Cavalier King Charles Spaniel anogona kunge ari anonyengera, sekune mamwe matoyi marudzi. Housetraining inoshanda zvakanyanya kana iwe ukavachengeta pane inoenderana purogiramu uye nekuvapa mikana yakawanda yekuenda kunze.
Pasina nguva, vanozodzidza kubuda vega.
Cavalier King Charles Spaniels vane akakwenenzvera majasi, uye ivo vanoda kwakawanda kutarisisa uye kugara uchishamwaridzana.
Vanoda kurovedza muviri zuva nezuva uye kushambidzika kwevhiki. Iwe zvakare unofanirwa kutarisa nekuchenesa nzeve dzavo vhiki rega rega.
Ivo havashiviriri yakanyanyisa kupisa kana kutonhora mamiriro ekunze zvakanaka. Vanosarudza kugara munzvimbo inodzorwa nemamiriro ekunze uye vanofarira kurovedza mumba.
Iwe haugone kuvatora vachifamba pakati pezuva, kana muchando chinotonhora. Pamazuva anotonhora vangangoda jasi kuti vagare vachidziya kunze.
Exercise zvido zveCavalier King Charles Spaniel
Cavalier King Charles Spaniel madzitateguru aive imbwa dzemitambo . Izvi zvinoreva kuti vane mwero wakakwira zvine simba uye vanonakidzwa kurovedza muviri zvine mwero, nguva yekutamba, romp muyard uye zviitiko kunze.
Vanoda kuenda kunofamba nemuridzi wavo kana kunyange kutora chikamu mumitambo ye canine. Naivowo vanongofara kupedza zuva ravo vari pamubhedha nemumwe munhu.
Idzi imbwa dzinogona kunge dziri pamubhedha mbatatisi kana imbwa dzine simba-zhinji, zvinoenderana nevaridzi vadzo. Asi, kana zvichibvira, iwe unofanirwa kuedza kutora yako canine shamwari pane kufamba kweawa-refu mazuva ese.
Iwe unofanirwa kuvachengeta pane leash kana uchifamba sezvinoita hunhu hwavo hwekunhuwa nekutandanisa, uye vangangoda kusadzokera kwauri.
A Cavalier King Charles puppy inoda yakafanana nhanho yekurovedza kune imbwa vakuru. Asi pachinzvimbo, vatore vafambe kwenguva pfupi 2-3 pazuva.
Mukuru Cavalier King Charles Spaniel anogona kufamba famba mamaira mana, asi haufanire kuita izvi mazuva ese. Ramba uchifamba zuva nezuva uri chinhambwe maira imwe .
Kushambidzika: Ko Cavalier King Charles Spaniels anodurura?
Wako Mambo Charles Cavalier Spaniel haizove hypoallergenic . Cavalier King Charles Spaniel kuteura kunoitika kaviri pagore panguva yekudonha uye chitubu.
Kuti uchengetedze izvi kushoma, iwe unofanirwa kukwesha uye kuzora hura hwavo kazhinji.
Kunyangwe iyo isiri yekudonhedza mwaka, kuti vachengete yavo yakasviba jasi riine hutano, iwe uchazoda kushongedza wako Cavalier King Charles Spaniel nguva dzose.
Kumhanya kwepakati-bristle bhurashi kuburikidza nehwai hwavo kutenderera katatu kana kana pavhiki ndichaita hunyengeri.
Unongoda kuvagezesa pazvinenge zvakakodzera. Kana vachida kuve panze uye vachimbundira pane yako fenicha, iwe ungangoda kuvapa ivo yekugeza vhiki nevhiki.
Iyo yakareba, mvere dzemvere munzeve nemakumbo dzinogona kukanganisika, saka iwe uchafanirwa kutarisa nzvimbo idzi uye kudzisanganisa kunze. Iwe unogona zvakare kucheka bvudzi pakati petsoka, asi izvi hazvisi izvo zvinodiwa.
Cavalier King Charles Spaniels hadzisi imbwa dzinonhuwa kunze kwekunge dzakatenderedza dzakatenderera mune imwe tsvina. Ivo havana bhachi rine mafuta, rinobvisa mamwe acho imbwa kunhuwa yemamwe marudzi.
Kudyisa yako Cavalier King Charles Spaniel imbwa
Vavhivha vanoda chikafu, asi ivo vanogona kuve vanongodya chete , kunyanya kana zvasvika pakuoma chikafu. Edza kusakurudzira maitiro aya nekuvaitira pekugara chaipo.
Vachavhavha vanofanira kudya vakatenderedza hafu kune imwe kapu yemhando yepamusoro chikafu chembwa zuva nezuva. Nekudaro, huwandu uhwu hunosiyana zvichienderana nezera rembwa.
Vavhivha vanogona kukara, saka ita shuwa kuti unotarisa zvavanodya. Zvikasadaro, vanogona kuve vakafuta.
Ivo vanonamata vanobata asi usavape zvakanyanya. Kana iwe ukavapa tafura yezvimedu, ita saizvozvo zvishoma kana zvachose uye chenjera nezve chii chikafu chevanhu hachina njodzi kwavari .
Kana iwe ukapa yako King Charles Cavalier Spaniel chikafu chemumagaba, iwe unofanirwa kuedza kudhonza nzeve dzavo kumashure pavanodya. Ukasadaro, vanowana chikafu muhuswa hwavo.
Zvakare, edza uye utenge chikafu nemidziyo yemvura ine dhayamita nhete, kuti nzeve dzavo dzisadhonze mazviri.
Nepo nhengo dzeCavalier King Charles Spaniel imbwa dzinowanikwa kazhinji imbwa dzakagwinya , kune akati wandei e matambudziko ehutano izvo zvinogona kukanganisa kwavo makore ekurarama .
Havasi vese vaCavaliers vanokanganiswa nemamiriro aya. Asi zvakakosha kuti uzive kwavari kana iwe uchifunga kutora King Charles Cavalier Spaniel.
Vanogona kuva kunetseka kufema sezvo mhino dzavo diki. Ivo vanogona zvakare kuve ne yakamanikana, yakadzika trachea . Izvi zvinoita kuti kufema kunetse kwavari.
Ziva kufema zvine ruzha, kukosora, kufenda, bhuruu, uye kusashivirira.
Zvimwe zvakasiyana zvehutano zvinokanganisa iyo Cavalier King Charles Spaniel. Cavalier's anogona kutambura kubva matambudziko eziso . Izvo zvakanyanya pane izvi ndeizvi Kurwara uye Keratoconjunctivitis Sicca ( Ziso Rakaoma ) .
Kurwara zvinogona kukonzeresa hupofu muimbwa dzakura. Iwo malenzi emeso avo anogona kuita makore, achivaita kuti varasike kuona kwavo. Dzimwe imbwa dzinoenderana zvakanaka neizvi.
Asi pane zvinogona kuvhiiwa izvo zvinogona kubvisa maziso uye kudzorera maziso avo.
Keratoconjunctivitis Sicca inokonzerwa ne autoimmune reaction kune imbwa misodzi misodzi. Izvi zvinotungamira kudzikiswa kwemisodzi.
Mushure mekuongororwa kwechiremba wako Ziso Rakaoma , unogona kuibata nemadonhwe eziso ezuva nezuva. Kana ikasarapwa, inogona kukonzera imbwa yako kuenda ibofu.
Cavalier's anogona zvakare kutambura kubva matambudziko akabatana senge Hip Dysplasia uye Patellar Luxation.
Hip Dysplasia inogona kuve nemajini, asi inogona zvakare kukonzeresa kubva kunharaunda yembwa uye kudya. Izvi zvinogona kukonzeresa kubatana kwechiuno.
Mazhinji maCavaliers anogona kutungamira hupenyu hwezuva nezuva neichi chiitiko, asi ivo vangangoda kuvhiyiwa mune zvisingawanzoitika zviitiko.
Patellar Luxation mhedzisiro kubva mukuparadzaniswa kwePatella (mabvi akabatanidzwa). Muimbwa, izvi zvinoita kuti mabvi akabatanidzwa kutsvedza nekupinda munzvimbo, izvo zvinokonzeresa kurwadziwa.
Izvi zvinowanzoitika mumakumbo egumbo, uye imbwa zhinji dzinogona kutungamira hupenyu hwezuva nezuva neichi chiitiko.
Iyi imbwa dzinza dzinogona zvakare kutambura kubva mamiriro emwoyo uye chirwere chemoyo senge Mitral Valve Zvirwere ( MVD ) . Nehurombo, mamiriro aya akajairika muCavaliers.
Inotanga sekugunun'una kwemoyo asi ichawedzera, zvichizoguma nekuguma kwemoyo kutadza. Inogona kutokura pazera diki, sekutanga segore kana maviri ezera.
Humwe hutano hwakajairika hwakatarisana neCavalier King Charles Spaniels ndiye Syringomyelia (SM). Aya mamiriro etsinga anokanganisa zvese huropi uye musana.
Iyo inogona kuratidza sekusagadzikana kusagadzikana, kurwadziwa kwakanyanya, kana kunyangwe kuoma mitezo.
Chikonzero cheSM idhehenya risina kumira zvakanaka. Izvi zvinoderedza nzvimbo yehuropi, uye zviratidzo zvinogona kuitika kutanga kwemwedzi mitanhatu muhupenyu hwembwa yako.
Asi iwe unofanirwa kuchengeta ziso kunze kwezviratidzo zveSM kusvikira vasvika makore mana ekuberekwa.
Iwe unofanirwa kutarisa Cav yako kuti unzwisise kutenderedza mapfudzi, mutsipa, uye musoro, pamwe nekuhwihwidza kana kukwenya mweya (kugara uchingokwenya pamutsipa kana pabendekete usingabate).
Iwe unofanirwa kutora imbwa yako kuenda kuna vet kana iwe ukaona izvi zviratidzo.
Imwe mamiriro anowanzoitika muCav ndeye Episodic Kudonha . Izvi zvinowanzo kanganiswa ne canine pfari . Asi pane mumwe musiyano mukuru; imbwa yako icharamba ichiziva panguva yekubatwa kana kudonha.
Zvinoitika kana imbwa isingakwanise kusunungura nyama dzayo. Zviratidzo zve episodic kudonha zvinogona kubva pane dzimwe nguva, zvinyoro kudonha episodes kusvika paawa-refu kubatwa.
Dzimwe nyaya dzehutano dzinotambudzwa naMambo Charles Cavalier Spaniels ndezvekutapurwa nenzeve, Ichthyosis, itsvo matombo, allergies, uye matsi.
Kudzivirira nyaya dzehutano kana kuzvizivisa nekukurumidza, unofanirwa kuona kuti imbwa yako ine izvo zvinodiwa kuongorora hutano .
Kana iwe uri kutora imbwa yako kubva kumuchengeti, ita shuwa kuti iwe unowana mvumo yehutano kune vese imbwa dzevabereki.
Kuyedza kunokurudzirwa neNational Breed Club:
Havhareji yeCavalier King Charles Spaniel hupenyu hwehupenyu hwakatenderedza makore gumi nemapfumbamwe. Vanowanzo kufa nekenza, Mitral Valve Disease (MVD), kana syringomyelia (SM).
Wekare mupenyu Cavalier King Charles Spaniel yaive imbwa yainzi Tuppence uyo akararama kusvika makore gumi nemapfumbamwe ekuberekwa.
Kuisa maoko ako pane imwe yeiyi imbwa diki kunokutengera iwe kutenderedza $ 1000- $ 3500 USD . Mutengo chaiwo unoenderana nemuchengeti uye neruvara rwehuto.
Idzi imbwanana dziri kudiwa zvakanyanya, izvo zvinoita kuti dzidhure. Avhareji emarara avo i shanu, asi amai venguva yekutanga vanogona kungova nembwanana mbiri kana nhatu.
Unogona kuwana Cavalier King Charles Spaniel vana vanotengesa kubva vafudzi vane mukurumbira . Iwe unogona zvakare kutarisa muzvitoro zvezvipfuyo uye mapurazi epuppy, asi ita shuwa kuti ndizvo hunhu . Zvikasadaro, iwe unogona kutora Cav pup kubva pa kununura .
Mushure mekutanga mutengo wekutenga Cavalier puppy, iwe unofanirwa kuronga kutenderera $ 1500 USD pagore yekushambidzika, kupa chikafu, uye kutarisirwa kwezvipfuyo.
Usati wauya nembwanana yako nyowani kumba, ita shuwa kuti vanga vaine zvese kuongorora hutano kwakakodzera .
Cavalier King Charles Spaniel Vafudzi
Unogona kuwana Cavalier King Charles Spaniel vana vanotengesa kubva ku AKC pamusika . Kune zvakare Cavalier King Charles dhairekita dhairekitori inowanikwa pane iyo American Cavalier King Charles Spaniel Club's webhusaiti .
Zvikasadaro, iwe unogona kuyedza vanotevera vafudzi muUS:
Mayfair Vatasvi vemabhiza (IZVI)
Sungano Vatasvi (IZVI)
Ngano Cavaliers (KY)
Vanodakadza Charm Cavaliers (MT)
Karlee Grey Stone Cavaliers (NEW)
Cavalier King Charles Spaniel kununura
Kunyangwe hazvo maCavaliers ari anotsvaga-imbwa imbwa, ivo vanoguma vapedzisira mukununura kana dzimba dzekugara. Kana iwe uchitsvaga yakanakisa nzvimbo yekutora iyo Cavalier King Charles Spaniel, tarisa ma link pazasi.
ACKCS Kununura Kuvimba
Cavalier King Charles Spaniel Kirabhu yeGreater Atlanta
Kana iwe uchinetseka kuti mutsauko uripi pakati peCav nedzimwe mhando dzembwa, isu takazvipfupisa pazasi.
King Charles vs. Cavalier Mambo Charles Spaniel
Sangana naMambo Charles Spaniel imbwa - Mufananidzo sosi
Muzana ramakore rechi19, Cavalier King Charles Spaniels vakaberekwa neAsia imbwa dzekutambisa senge Pugs uye ChiJapanese Chin . Mhedzisiro yeiyi pairing inozivikanwa se Mambo Charles Spaniel muUnited Kingdom.
Mambo Charles Spaniel anotarisawo zvakasiyana neCav. Ivo vane dehenya rakadzvanywa uye kumeso kwakapfava nekamhuno kadiki pane iyo Cav. Iwo zvakare ari akati wandei akaenzana mativi, akaumbika uye emhungu imbwa.
Chirungu Toy Spaniel VS Cavalier King Charles Spaniel
Iyo Yakanaka Chirungu Toy Spaniel puppy - Mufananidzo sosi
Chirungu Toy Spaniel izita reUnited States raMambo Charles Spaniel ataurwa pamusoro. Ivo havasi ivo vakafanana rudzi seCavalier King Charles Spaniel asi vane madzitateguru akafanana.
Sangana neyakajaira uye wavy jasi imbwa, Cocker Spaniel
Iyo Cocker Spaniel yakakura kudarika iyo Cavalier King Charles Spaniel. Iyo Cocker Spaniel ndiyo diki pane iyo inoshanda Spaniel rudzi.
Ivo vaviri vane silky, wavy, epakati-kureba majasi, asi Cocker Spaniels ane akasiyana mavara ejasi mavara achienzaniswa neyaCavalier mana. Kusiyana neCav, Cocker Spaniels akaberekwa sembwa dzinoshanda pakutanga kwezana ramakore rechi14.
Tibetan Spaniel VS Cavalier King Charles Spaniel
Sangana naMoxie, inonakidza Tibetan Spaniel imbwa - Mufananidzo sosi
Tibetan Spaniels imbwa dzinotapira uye dzinotamba. Izvo zvidiki pane maCav uye zvakare hazvina kudhura. Ivo vakarerwawo sevamwe imbwa uye vanovenga kuve vega.
Ivo havana mvere dzemakushe asi vane jasi re silky. Izvo zvakare hazvidurure zvakanyanya saMambo Cavalier Charles Spaniel, uye bhachi ravo rinouya mune akawanda akawanda mavara zvakare.
Kana iwe uchifunga kuti Cavalier King Charles Spaniel akanaka, mira kusvikira iwe waona mamwe emakwikwi eCavalier!
Iyo Cavapoo muchinjikwa pakati peCavalier King Charles Spaniel uye imbwa yePoodle yakaberekwa. Ivo vanozivikanwa zvakare seCavadoodle uye Cavoodle . Vanoda kumbundira kwakanaka uye vanoita imbwa dzemhuri huru.
Ivo vaviri vadiki veCavapoo vana - Mufananidzo sosi
Muchinjikwa pakati paMambo Charles Cavalier Spaniel neBichon Frize inozivikanwa se Cavachon . Idzi imbwa dzinotamba, dzinoyevedza, uye dzichakupa zvisingagumi cuddles.
Sangana neiyo imbwa yeCavachon yakapfeka inoyevedza karenji kavha - Mufananidzo sosi
Sravana Sameeralu Serial 4th Cockalier ndiro zita rakapihwa musanganiswa pakati peCocker Spaniel neCavalier King Charles Spaniel. Kana iwe uchitsvaga akapfava, akangwara pooch nechishongo chevabereki vavo vese, uyu ndiwo musanganiswa wako.
Mufambi mutema Cockalier imbwa - Mufananidzo sosi
Iyo Aussalier iri yemasanganiswa pakati peiyo toy kana diki yeAustralia Mufudzi neCavalier King Charles Spaniel. Vane simba rakakura uye rudo rwakawanda rwekupa.
Mee imbwa inoyevedza yeAussalier yakarara pamubhedha wayo wakanaka - Mufananidzo sosi
TO Cavador ndiko kusanganiswa kweCavalier King Charles Spaniel uye Labrador retriever. Huchenjeri hwavo, hushamwari, uye hunhu hunodiwa ndezvimwe zvezvikonzero zvinoita kuti vanhu vanamate uyu musanganiswa.
Iyo yakanaka mudiki Cavador puppy - Mufananidzo sosi
Iyo Cavalier King Charles Spaniel imbwa ine rudo uye yakapfava inogadzira imbwa yemhuri yakanaka. Vanowirirana zvakanaka nevana, vatorwa, uye dzimwe mhuka.
Idzi imbwa dzekutambisa dzinovenga kuva dzoga. Kana vasina kugara vachifambidzana, vanogona kuita zvinoparadza, neruzha, uye vasingafare.
Ivo vanodawo yakawanda yekuchengetedza uye kutarisirwa; pane chikonzero nei King Charles achiregeredza nyika yake kutarisira maCavs ake.
Idzi imbwa dzekutambisa dzinonyungudutsa moyo wako, chengetedza pamakumbo ako kudziya uye uve nechokwadi chekuti hauzomboendi kuchimbuzi wega wega. Tinoda kunzwa nezve pfungwa dzako uye zviitiko neCavalier King Charles Spaniel!
ChiGerman Mufudzi Husky Musanganiswa: Huturu, Kutungamira Gwara uye Chokwadi
marudzi ose emagomba anobereka
half husky half german shepherd puppies
gomba nzombe labrador retriever musanganiswa